ကမ္ဘာ့မတ်လ - အကြမ်းမဖက်၏နေ့အကြောင်းကိုအားလုံးရှာဖွေတွေ့ရှိ
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြမ်းမဖက်၏နေ့အကြောင်းကိုအားလုံးရှာဖွေတွေ့ရှိ
သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးအခြို့သောပဋိပက္ခများကိုဖြေရှင်းရန်ကိရိယာတခုအဖြစ်အသုံးပြုအကြမ်းဖက်မှု, ကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများအကြားအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်အတွက်လေးနက်သောပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်များကိုအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောအုပ်စုများ၏မြင်ကွင်းမြှင့်တင်ရန်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်လောလောဆယ်ကွဲပြားခြားနားသောအဖွဲ့အစည်းများ အကြမ်းမဖက်၏နေ့ နှင့်ခေါင်းစဉ်မှဆက်စပ်ထိုကဲ့သို့သောရက်။ တစ်နှစ်ကျော်ကျနော်တို့မြင်သာလိုအပ်သောကိစ္စများ၏အသိပညာပေးရည်ရွယ်ထားကြောင်းကွဲပြားခြားနားသောနေ့ရက်ကာလကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အကြမ်းဖက်မှုပျေါလှငျ related ရက်ပေါင်းအကြားက Non-အကြမ်းဖက်မှုနိုင်ငံတကာနေ့အဖြစ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါဇာတ်လမ်းကိုအခြေပြုစစ်ပွဲများ, အဆုံးမဲ့ခိုက်ရန်နှင့်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများအတုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အင်ပါယာရွာလွတ်လပ်ခွင့်နှင့်လူ့အသက်တာ၏ကျွန်၏ချိုးဖောက်မှုများ၏ဖကျြဆီးခွငျးအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ သမိုင်းကာလယဉ်ကျေးမှုပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားခြားနားသောအုပ်ချုပ်မှုအဆောက်အဦများနှင့်ဖိနှိပ်မှုအတုကြနှင့်များစွာသောအဆင့်အချို့ယဉ်ကျေးမှုအခွင့်အရေးကိုမြှင့်တင်ခြင်းတို့အတွက်အလောင်းတွေကိုတီထွင်ခဲ့ကြပေမယ့်, အစဉ်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း, ဥပဒေရေးရာမာဂျင်အပြင်ဘက်တွင်ရှိနေဆဲပြီအုပ်စုများရှိပါပြီ သူတို့ကိုဦးတည်ဖယ်များနှင့်အကြမ်းဖက်မှုများ။
22အောက်တိုဘာလ: က Non-အကြမ်းဖက်မှုနိုင်ငံတကာနေ့
3 အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းမဖက်နိုဝင်ဘာလ 25 နေ့က
3.1 ဒီနေ့စွဲ၏တည်ရှိမှုများအတွက်အကြောင်းပြချက်: အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းမဖက်နိုဝင်ဘာလ 25 နေ့က
3.2 အဘယ်ကြောင့်နေ့အခမ်းအနားနိုဝင်ဘာလ 25 အကြမ်းမဖက်မြှင့်တင်ရန်?
4 non-အကြမ်းဖက်မှုများနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ၏ဇန်နဝါရီလ 30 ကျောင်းနေ့
4.1 အဘယ်ကြောင့်ဇန်နဝါရီလ 30 တွင်ကျင်းပခဲ့သည်အကြမ်းမဖက်ခြင်းနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်း၏နေ့၌ကျောင်းများရှေးခယျြ?
5 နိုဝင်ဘာလ 19 ကမ္ဘာ့ဖလားကလေးများနှင့်လူငယ်ဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိပါအကြမ်းဖက်မှုများ
7 စပိန်ဟာကမ္ဘာ့က Non-အကြမ်းဖက်မှုနိုင်ငံတကာနေ့အဘို့ချီတက်ဦးဆောင်
လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဆက်စပ် non-အကြမ်းဖက်မှုနိုင်ငံတကာနေ့ တော်တော်များများရှိပါတယ်။ နှင့်ကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားသောလူဦးရေကဏ္ဍများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပြက္ခဒိန်အတွက်အကြမ်းမဖက်နေ့ရက်များစွာရှိပါတယ်:
အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းမဖက်မှု၏ 25 နေ့က
2 အောက်တိုဘာလပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးက Non-အကြမ်းဖက်မှု၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေ့
ကျနော်တို့အကြမ်းမဖက်သူငယ်၏တစ်နေ့တာ confudir မပြုလုပ်သင့်သော 30 ဇန်နဝါရီလ Non-အကြမ်းဖက်မှုကျောင်းနေ့
သူတို့ကတောင်သူတို့ကွဲပြားခြားနားသောကဏ္ဍများအတွက်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးမှာမိမိတို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုအာရုံစူးစိုက်မှုကွဲပြားခြားနားသောနယ်ပယ်များတွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဘုံရည်မှန်းချက်ရှိသည်: ကမ်ဘာပျေါတှငျရှိကွောငျးဆိုကွမျးဖကျအလေ့အကျင့်ကိုအဆုံးသတ်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအပေါင်းတို့, ငြိမ်းချမ်းရေးလက်လှမ်းမမီဖွင့် ကမ္ဘာလုံး၏ထောင့်နှင့်, ဤဤမျှနိုင်ငံသားများတူညီသောအခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်များရှိစေခြင်းငှါ
2 အောက်တိုဘာလ: က Non-အကြမ်းဖက်မှုနိုင်ငံတကာနေ့
non-အကြမ်းဖက်မှုနိုင်ငံတကာနေ့ ဒါကြောင့်အချိန်ကိုသောကြောင့်ထိုသို့တိုင်းအောက်တိုဘာလ2အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ပါတယ် မဟတ္တမဂန္ဒီ၏မွေးအခမ်းအနား။ နှင့်ဂန္ဒီရဲ့အတွေးအခေါ်မဆိုအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး၏အသုံးပြုမှုအပေါ်အခြေခံသည်။
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမျှအကြမ်းဖက်မှုများရွေးကောက်တော်မူသောနေ့ကဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ resolution ကို 15 / 2007, 61 အောက်တိုဘာလများကကြေညာတဲ့အခါမှာဒါဟာယခုနှစ် 2712ဇွန်လဖြစ်ခဲ့သည်။ အကြမ်းမဖက်ဤသည်နေ့ရက်သည်တစ်ဦးမျှတတဲ့လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းအောင်မြင်ရန်သူတို့ဘဝတလျှောက်လုံးရုန်းကန်ကြသူကွဲပြားခြားနားသောကျော်ကြားသောလူမျိုးသည်ကိုဂုဏ်ပြုရန်စီစဉ်နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုခေါင်းဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်အရာကိုလူ့အသက်ကိုစောင့်တော်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးများအတွက် tool ကိုအဖြစ်အသုံးပြုလျက်ရှိသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့က Non-အကြမ်းဖက်မှုကမ္ဘာ့ဖလားနေ့ဘောင်ခတ်ကြောင်းယဉ်ကျေးမှု, အရပ်ဘက်အခွင့်အရေးနှင့်လူမှုရေးပြောင်းလဲမှုများအတွက်ရုန်းကန်အဖြစ်အာရုံစူးစိုက်နေသည်။
အတော်များများကအကြမ်းမဖက်၏ဘာနေ့တွေးမိနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အကြမ်းမဖက်တဲ့နေ့ကပြောဆိုထားသည်။ နှင့်ကျွမ်းကျင်သူများကက Non-အကြမ်းဖက်မှုတစ်ဦးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေ့ရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်, ကနိုင်ငံအကြားနှင့်သူတို့အတွင်းပဋိပက္ခများကိုဖြေရှင်းအကြမ်းဖက်မှုများ၏အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိအမြင်ဖန်တီးကူညီပေးသည်။
ထို့ကြောင့်အကြမ်းမဖက်၏အောက်တိုဘာလ2နေ့, ကွဲပြားခြားနားသောအဖွဲ့အစည်းများနှစ်ဦးစလုံးတိုက်ရိုက်နှင့် subliminally, ကမ္ဘာပေါ်မှာအလွန်အကျွံအကြမ်းဖက်မှုများသရုပျဖျောကြောင်းဖြစ်ရပ်များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အဘို့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းမဖက်၏ဤသည်နေ့ရက်တောင်းဆိုဖို့တက်ကြွစွာသငျသညျကမ်ဘာအနှံ့ဖွဲ့စည်းချီတက်ပွဲတွင်ပါဝင်ရန်, ဒါမှမဟုတ်ပေါင်းစည်းမှု tools များမှတဆင့်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အကြမ်းမဖက်၏နေ့ဖန်တီးရန်အဆောက်အဦတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်အသင်းအဖွဲ့များ join လို့ရပါတယ် နှင့်ရိုသေလေးစားမှု။
သငျသညျမြို့ရွာနှင့်မြို့ကြီးများရှိဖျော်ဖြေကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ရပ်များအတွက်အကြမ်းမဖက်အောက်တိုဘာလ2နေ့၌ပါဝင်ဆောင်ရွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်တစ်ဦးဆက်စပ်အသင်းအဖွဲ့ချဉ်းကပ်တာကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ် အကြမ်းမဖက်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး၏နေ့ သူတို့ကိုအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့ကိုဆက်ကပ်။
ကက Non-အကြမ်းဖက်မှုများ၏2နိုဝင်ဘာလအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေ့ကြောင်းဘုံရှုပ်ထွေးစဉ်းစားတွေးခေါ်ဖြစ်ပါသည်ကတည်းကကျနော်တို့အလေးပေးလာသောအခါ၎င်းသည်2အောက်တိုဘာလဖြစ်သော, ရက်စွဲသတိထားဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ ထိုသို့တစ်ခါတစ်ရံတွင်ရှုပ်ထွေးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သောအင်တာနက်ပေါ်ရှိသတင်းမှားဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းမဖက်နိုဝင်ဘာလ 25 နေ့က
El အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုဆန့်ကျင် 25 နိုဝင်ဘာလအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေ့က, အကြမ်းဖက်မှုမြင်နိုင်အားလုံးမော်ဒယ်များဤအုပ်စုအပေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်မကြာခဏလျစ်လျူရှုသို့မဟုတ်ငြိမ်ဝပ်စွာနေကြောင်းစေရန်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့စွဲ၏တည်ရှိမှုများအတွက်အကြောင်းပြချက်: အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းမဖက်နိုဝင်ဘာလ 25 နေ့က
အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုထိုကဲ့သို့သောအခြားသူတွေအကြားအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု, သားဖွါးအကြမ်းဖက်မှု, နှောင့်ယှက်, မုဒိမ်းမှုသို့မဟုတ်လုပ်အားခမညီမျှမှုအဖြစ်လုပ်ရပ်များနှင့်အခြေအနေများပါဝင်သည်။
ဤသူအပေါင်းတို့သည်အခြေအနေများအမျိုးသမီးများ၏စောင့်ရှောက်သူများသို့မဟုတ်အိမ်အကူ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအဖြစ်, သူတို့ကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြရိုးရှင်းစွာသောကွောငျ့လူတို့အားနှိုင်းယှဉ်နည်းလမ်းများစွာအတွက်ယုတ်ညံ့စဉ်းစားနေကြသည်, သို့မဟုတ်ကျားမအခန်းကဏ္ဍချီးမြှင့်ကြသည်ပါဝငျ။
အဘယ်ကြောင့်နေ့အခမ်းအနားနိုဝင်ဘာလ 25 အကြမ်းမဖက်မြှင့်တင်ရန်?
အမျိုးသမီးကျားမအပေါ်ထူထောင်အကြမ်းဖက်မှုကြောင့်စစ်တိုက်ခြင်းငှါ, အများဆုံးကျယ်ပြန့်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ 1993 နှစ်တွင်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးအပေါ်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၏ကြေညာစာတမ်းကထုတ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့နိုင်ရန်အတွက်များ၏ပြောဆိုချက်ကိုအဆုံးသတ်မှစဉ်းစားသည် အကြမ်းမဖက်ခြင်းနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်း၏ 25 နေ့က ဒါကြောင့် (မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ထက်ဝက်ထက်ပိုတဲ့သူ) မိန်းကလေးများနှင့်အမြိုးသမီးမြားကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲအသက်ရှင်နေထိုင်ကြောင်းလိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်, အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုထိုသူတို့အဘို့လုံခြုံ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်။
က 25 နိုဝင်ဘာလ 2017 အကြမ်းဖက်မှုနောက်ပိုင်းလူ့အခွင့်အရေးအောင်မြင်ကြသည်မဟုတ်သည်အထိဤအမှု၏အသိအမြင်မြှင်အတွက်တိုးတက်မှုအချို့တွေ့ကြုံခံစားရန်စတင်ကြပြီစစ်မှန်တဲ့င်စဉ်များနှင့်များစွာသောကမ္ဘာ့ကုမ္ပဏီများကငျြ့ဝတျဆီသို့ဦးတည်မျှမျှတတနှင့်မျှတစွာတိုးကြသည်မဟုတ်ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစား ရှယ်ယာနှင့်သည်းခံစိတ်၏တန်ဖိုးများအပေါ်အခြေခံပါတယ်။
non-အကြမ်းဖက်မှုများနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ၏ဇန်နဝါရီလ 30 ကျောင်းနေ့
ဇန်နဝါရီလ 30 non-အကြမ်းဖက်မှုများနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ၏ကျောင်းစာအုပ်နေ့ အိန္ဒိယအမျိုးသားနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာခေါင်းဆောင်ခဲ့တဲ့မဟတ္တမဂန္ဒီ၏သေမင်း၏အထိမ်းအမှတ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်နေ့ရက်သည် 1964 ကတည်းကကျင်းပခဲ့ပေမယ့်ကုလသမဂ္ဂအသိအမှတ်ပြုလာသောအခါ 1993 သည်အထိမဟုတ်ခဲ့သည်။
El non-အကြမ်းဖက်မှုဇန်နဝါရီလ 30 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေ့ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်ကွဲပြားခြားနားသောကျောင်းများလုပ်ရပ်များမှာကျင်းပ။ ဒါဟာထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် Non-အကြမ်းဖက်မှု၏ဤကျောင်းနေ့အဘို့အဓလေ့ထုံးတမ်းဖြစ်ပါတယ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုများထွက်သယ်ဆောင်နေကြ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အကြမ်းမဖက်၏ပုံပြင်နေ့ကသို့မဟုတ်သီချင်းတွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဆက်စပ်သောနှင့်တိုင်းပြည်တွင်နေထိုင်လျက်ရှိသည်သို့မဟုတ်တစ်နေရာရာမှာကမ္ဘာပေါ်မှာလည်းမနာသီချင်းဆိုပါမည်တဲ့အခွအေနေကျလာသော။
အဘယ်ကြောင့်ဇန်နဝါရီလ 30 တွင်ကျင်းပခဲ့သည်အကြမ်းမဖက်ခြင်းနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်း၏နေ့၌ကျောင်းများရှေးခယျြ?
ဤသည်နေ့ရက်သည်သားတို့နှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောလှုပ်ရှားမှုများအဘို့ကျောင်းတွေကရွေးချယ်ထားသည်။ ဤသည်နေ့ရက်ကာလတစ်ခုလုံးကိုမူလတန်းနှင့်မွေးကင်းစကလေးဇာတ်စင်တစ်လျှောက်လုံးကျင်းပကြသည်နှင့်က Non-အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်း၏လှုပ်ရှားမှု၏အသေးငယ်ဆုံးလူသိများကိုယ်စားလှယ်ကိန်းဂဏန်းများကြောင်းရည်ရွယ်သည်။ အများဆုံးကိုယ်စားလှယ်ကိန်းဂဏန်းများများထဲတွင်မဟတ္တမဂန္ဒီ, နယ်လ်ဆင်မန်ဒဲလား, မိခင်မာရိသည်ထရေဇာသို့မဟုတ်မာတင်လူသာဘုရင်ဖြစ်တော်မူ၏။
ထိုသို့သောအကြမ်းဖက်မှုဆန့်ကျင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေ့ကအဖြစ်, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကတည်းကအကြမ်းမဖက်၏သေးငယ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနေ့, ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အကြမ်းမဖက်၏နေ့နှင့်ဆက်စပ်သောအချိန်ကိုက်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုနေ့တိုင်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ရန်အရေးကြီးပါသည် 25 နိုဝင်ဘာလက, အကြမ်းမဖက်၏အောက်တိုဘာလ2နေ့က Non-အကြမ်းဖက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်နှင့်မိဿဟာယသို့မဟုတ်ကျောင်းနေ့ဖြစ်၏။
နိုဝင်ဘာလ 19 ကမ္ဘာ့ဖလားကလေးများနှင့်လူငယ်ဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိပါအကြမ်းဖက်မှုများ
နိုဝင်ဘာ 19 အဆိုပါဖြစ်ပါသည် အကြမ်းမဖက်ကလေးများနှင့်လူငယ်၏နေ့ကအသက်ငယ်ဆီသို့ဦးတည်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အလွဲသုံးစားမှုမှအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဤသည်နေ့ရက်တိတ်နေဖြင့်အရေးပေါ်နှင့်ထိရောက်သောအစီအမံများတည်ထောင်ရန်နိုင်ရန်အတွက် default အနေဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောအခါဒါဟာတစ်နှစ် 2000 ၌ရှိ၏။ ထို့အပြင်နိုဝင်ဘာလ 20 Synergy နိုင်ငံတကာကလေးများနေ့အတွက်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ပါတယ်။
သားသမီးတို့အဘို့အကြမ်းမဖက်ကလေးများနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင် tools တွေကိုသူတို့ဝန်းရံသည်ဟုယုံကြည်စိတ်ချအရွယ်ရောက်ဖို့နှိုးဆော်သံပေးရအသုံးပွုနိုငျအလွဲသုံးစားလုပ်မှုအတွက်အသုံးအများဆုံးနည်းစနစ်များမှာအဘယ်သို့သောအကြောင်းအသိပညာပေးအသုံးပြုသည်၏ဤသည်နေ့ရက်သည်။
ကလေးများနှင့်လူငယ်၏အလွဲသုံးမှုနှင့်ခေါင်းပုံဖြတ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနိုင်ငံအားလုံးစိုးရိမ်ကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်အလွဲသုံးစားမှုဒီလိုမျိုးလူမျိုး, တိုင်းပြည်, ယဉ်ကျေးမှုသို့မဟုတ်လူမှုရေးအဆင့်အတန်းကိုအဘယ်သူမျှမခြားနားစေသည်။
အ အရွယ်မရောက်သေးသူဆန့်ကျင်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုများ၏အမှုများကို သူတို့ကအဖွဲ့အစည်းရာပေါင်းများစွာနှင့်အစိုးရမဟုတ်သောစနစ်များကိုအရေးယူနှင့်ဤအမှုများကိုထုတ်ဖော်ဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်ပညာရေးနှင့်နှိုးဆော်သံစနစ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်အရှင်အားလုံးနယ်ပယ်များတွင်အရေးယူဘို့ protocols များတည်ထောင်ရန်စတင်ရာ၌ခန့်ထားပြီ: မိသားစုများ, ပညာရေးစင်တာနှင့်အပန်းဖြေဒေသများ ။
: အဆိုပါကျွမ်းကျင်သူများကသူတို့ခံစားနေရပြီးနေကြသည်သို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားမှုခံစားခဲ့ကြရသည်သည့်အခါကလေးများနှင့်လူငယ်များတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်သောအသုံးအများဆုံးညွှန်းကိန်းများစာရင်းကို created
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေ: ပျက်စီးခြင်းရင်းနှီးသောဒေသများ, ထိုကဲ့သို့သောသွေးထွက်, ရောင်ရမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ရောဂါကူးစက်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများ: ကြောက်စိတ်, phobias, ထပ်တလဲလဲအိပ်မက်ဆိုး, အညစ်အိပ်ပျော်ခြင်း။ ပြီးသားဝယ်ယူကျွမ်းကျင်မှုအတွက် Misbehaving သို့မဟုတ်ဆုတ်ယုတ်။
ပတျသကျ. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, မိသားစုနှင့်ကျောင်းပုန်ကန်မှု, underachievement ။
ဒီလမ်းညွှန်နှုတ်ဖြင့်သူ့ကိုပြောပြရန်သူတွေကိုဖြစ်ရန်မလိုဘဲအလွဲသုံးစားမှုငယ်ရွယ်သောရောဂါလက္ခဏာတွေ detect လုပ်ဖို့မိသားစု, သူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်ဆရာများနိုင်အောင်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကံမကောင်းစွာပဲ, ကစျခြိနျလုံးသူတို့ယဉ်ကျေးသို့မဟုတ်မစဉ်းစားနေကြသည်ဖြစ်စေ, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှတည်ရှိသောပဋိပက္ခများကိုအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, လူ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုချိုးဖောက်မှုများ, အကြမ်းဖက်မှုများ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေ့ကကြောင်းပုံရသည်။
တစ်ခုချင်းစီကိုနိုင်ငံ၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ကသိမ်းယူအခွင့်အရေးများအတွက်တိုးတက်မှုသို့မဟုတ်ဆုတ်ယုတ်မှုပေါ် မူတည်. သင်အကြမ်းဖက်မှု၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများကိုစောငျ့ရှောကျနိုငျသညျ။ လူအတော်များများဟာဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများ၌တစ်ဦးကိုင်ထားရန်မလိုအပ်မယ်လို့ထင်စေခြင်းငှါ, အကြမ်းမဖက်ဆန့်ကျင်ကမ္ဘာ့ဖလားနေ့သို့ဖြစ်. မရှိတော့ပါကြောင်းသို့မဟုတ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်ထိုက်တန်ရှိကွောငျးယူဆ။
ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ဒီနိုင်ငံရဲ့လတ်တလောသမိုင်းကျော်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနှင့်သွယ်ဝိုက်နှစ်ဦးစလုံးအစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်မှုအခြေအနေများ, ကြုံတွေ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု (မိမိနေ့နိုဝင်ဘာလ 25 အကြမ်းဖက်မှုများဖြစ်ပါတယ်) ဒီလူ့အဖွဲ့အစည်းရေလွှမ်းသောအဓိကအခက်အခဲများထဲမှနေဆဲဖြစ်သည်။
သူလည်းသူ့ရဲ့မြို့သားတို့၏နေ့စဉ်ဘဝခြိမ်းခြောက်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်ဝါဒအတွက်အဆင့်ဆင့်နေထိုင်ခဲ့သိရသည်။ တိုက်ရိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကြမ်းဖက်နိုင်ငံသားများစော်ကားသူကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များကနေရာများအစားထိုးလိုက်ခဲ့ဆန္ဒခံယူပွဲ၏, Catalonia နေရာယူခဲ့ 1 အောက်တိုဘာလအကြမ်းဖက်မှုမြင်ယောင်ခဲ့အများဆုံးစိုးရိမ်ပူပန်မှု၏ဆန္ဒပြလုပ်ရပ်များများထဲတွင်။ ဒီအကြောင်းပြချက်များအတွက် အကြမ်းမဖက်၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနေ့က 2017 ဒါဟာအထူးသဖြင့်သိသာခဲ့ပါတယ်။
သငျသညျစပိန်အရှိဆုံးယဉ်ကျေးတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, ဤရှိနေသော်လည်းတစ်ဦးချင်းစီ၏အခွင့်အရေးနှင့်အာမခံခကျြမြားမှာများစွာသောစော်ကားမှုကျူးလွန်သည်ဟုစဉ်းစားပါလျှင်၎င်းသည်အောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့်သို့မဟုတ်လုံးဝမဒီမိုကရေစီနှင့်အတူတခြားနိုင်ငံတွေအတွက်ဖွစိတ်ကူးရန်လွယ်ကူသည်သို့မဟုတ် စစ်ပွဲအတွင်း mired ။
ဤအရာအလုံးစုံအကြောင်းပြချက်များအတွက်၏ဖြစ်ရပ်၌ရှိသကဲ့သို့တစ်ဦးချင်းစီ၏အခွင့်အရေးကိုတိုက်ပွဲမြှင့်တင်ရန်ကြောင်းအဖွဲ့အစည်းများရှိပါတယ် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အကြမ်းမဖက်များအတွက်ကမ္ဘာ့မတ်လ, တစ်နှစ်ပြီးနောက်တစ်နှစ်အလုပ်လုပ်, နိုင်ငံတကာကအကြမ်းဖက်မှုအသုံးမပြု၏အရေးပါမှုအပေါ်နိုင်ငံသားများနှင့်၎င်းတို့၏အစိုးရများအကြားအသိအမြင်မြှင့်ရန်။